Atụmatụ SEO iji bulie saịtị e-commerce gị na 2018 | ECommerce ozi ọma
Atụmatụ SEO iji bulie saịtị e-commerce gị na 2018 a
Njikwa Nchọgharị Search (SEO) ma ọ bụ na Spanish, njikarịcha njin ọchụchọ bụ otu akụkụ nke ndị nwe ụlọ e-commerce kwesịrị ịkwụ ụgwọ pụrụ iche, ebe ọ bụ otu n'ime isi ihe kpatara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ịntanetị.
Mee ka mma akụkụ oru nke SEO nke saịtị gị, ọ ga - enyere gị aka ịkwado onwe gị dịka ụlọ ọrụ wee too, maka nke a anyị na - enye gị ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka ịmata ma saịtị gị ọ dị n'usoro n'akụkụ ndị a.
1 Gbaa mbọ hụ na engines ọchụchọ nwere ike ịchọta saịtị gị:
2 Lelee ọsọ na nzaghachi nke weebụsaịtị gị:
3 Tinye mkpụrụ okwu kachasị mkpa na mpaghara ụfọdụ nke weebụsaịtị gị:
Gbaa mbọ hụ na engines ọchụchọ nwere ike ịchọta saịtị gị:
Nzọụkwụ mbụ iji hụ na ọnụnọ ụlọ ọrụ gị bụ ịmegharị ọchụchọ Google iji mata peeji ndị edepụtara na ngalaba ahụ. Ọ bụrụ na saịtị gị anaghị egosi, ị ga-enyerịrị URL gị ozugbo na Google ma tinye njikwa saịtị site na iji njikwa njikwa. I nwekwara ike izipu ihe a niile na Bing.
Lelee ọsọ na nzaghachi nke weebụsaịtị gị:
Were nnwale ule nke ekwentị mkpanaaka iji chọpụta ma peeji gị ga-ehicha n'ụzọ ziri ezi na ekwentị mkpanaaka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịjụ gị programmer ịzụlite a ọzọ anabata imewe na-enyere ndị na peeji nke imeghari ka niile mobiles n'agbanyeghị nke ma si otú mma ahịa ahịa.
Tinye mkpụrụ okwu kachasị mkpa na mpaghara ụfọdụ nke weebụsaịtị gị:
Gụnyere Keywords na ndị na-esonụ ọcha nke gị na peeji nke nwere ike inyere gị aka melite search engine na ọhụhụ nke gị na peeji nke. Isiokwu ahụ ga-enwerịrị isiokwu ahụ, na-esote onyinye nke ndị ahịa na-enweghị ike ịjụ, gbakwunye mkpụrụokwu ahụ na nkọwa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ ma jide n'aka na mkpụrụokwu ahụ pụtakwara na akara H1, H2, H3, wdg. dị ka ọdịnaya nke ederede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Atụmatụ SEO iji bulie saịtị e-commerce gị na 2018 a
Etu ị ga - esi kpuchido saịtị gị na aghụghọ n’ahịa ahịa a na - abịa n’afọ a
Mgbanwe na e-azụmahịa na 2018 nke a ghaghi iburu n’uche iji nwee ihe ịga nke ọma dịka onye ọchụnta ego